JUNE&MAY: June,May @ Universal Studio
Posted by JuneOne at 2:24 PM
TZA October 24, 2010 at 3:38 PM
ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ ကလေးအမေကတော့ ပျင်းရမှာကိုမဟုတ်ဘူး..
MrDBA October 24, 2010 at 4:45 PM
:P October 24, 2010 at 8:37 PM
ချောလိုက်၊ လှလိုက်ကြတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်
nu-san October 24, 2010 at 8:43 PM
သားသားရဲ့စတိုင်ကတော့ လန်းသလားမမေးနဲ့.. ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ပဲပေးတတ်တယ်.. သမီးလေးကလည်း ပျော်နေတာ.. အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်.. မောင်နှမ ၂ ယောက်စလုံး..:))
nu-san October 24, 2010 at 8:44 PM
မေ့သွားလို့.. မေမေပါ ပါတယ်.. ချစ်စရာ သားအမိတွေ.. :D
khin oo may October 24, 2010 at 9:39 PM
သားလေးက နဲနဲတည်လာတယ်နော်. လူကြီးဆန်လာသလိုဘဲ. ညဏ်ကြီးမဲ့ပုံ.။ ချောတာတော့အားလုံးချောကြတယ်။ မိလေးလဲလှယတ်မေမေလဲလှတယ်။
khin oo may October 24, 2010 at 9:40 PM
JuneOne October 24, 2010 at 11:04 PM
မမ kom : မနက်၁၀ နာရီ ကနေ ညနေ၇နာရီ အထိ က ၇၆ ကျပ်က အကုန်ဝင်လို့ရတယ်။ကစားလို့လဲ
ရတယ်။ပြတိုက်လိုဟာမျိုးတွေလည်းဝင်လို့ရတယ်။ညဖက် ၅ကျပ်သမားတွေ ကျတော့
အဲဒါတွေ အားလုံးပိတ်သွားပြီ။အပြင်က ကြည့်လို့ပဲရတယ်။
How to buy that evening ticket?
Do I need to buy online or can I buy at the counter?
JuneOne October 26, 2010 at 12:13 PM
Anonymousးည ရနာရီ လက်မှတ်အတွက် ၆း၃၀ မှာလက်မှတ်စရောင်းပါတယ်။TICKET COUNTERမှာတန်းစီပြီးဝယ်ရတာပါ။
The Queen October 26, 2010 at 12:54 PM
Edwin looks kind to May.